Wararka Android Xidho 2.0 | Wararka Gadget
Kuwani waa sheekooyinka ugu waaweyn ee aan ka heli doonno '' Android Wear 2.0 ''
Villamandos | | Android, Qalabka la gashan karo
Shalay un Google ayaa si rasmi ah u shaacisay imaatinka suuqa ee Android Wear 2.0, nooca labaad ee nidaamkeeda hawlgalka, gaar ahaan soo-saare aaladaha la gashado, oo dhexdooda, shaki la'aan, smartwatches-ka taagan. Maqaalkani waxaan horeyba kuugu tusnay liistada dhamaystiran ee saacadaha casriga ah ee heli doona cusbooneysiinta software-ka ee ay shalay ku dhawaaqday shirkadda raadinta.
Sida laga soo xigtay David Singleton, madaxweyne ku xigeenka Android Wear, tani maahan wax cusbooneysiin ah, laakiin waa kii ugu weynaa ee la sameeyo ilaa maanta. Waxaas oo dhan waxaan go'aansanay inaan kugu sheegno qodobkaan kan ugu weyn wararka aan ka heli doonno Android Wear 2.0.
1 Kaaliyaha Google
2 Shakhsiyeyn iyo fudeyd
3 Fursadaha cusub ee adeegsiga codsiyada
Sugitaanku wuu dheeraaday laakiin ugu dambeyntii Caawiye caaqil Google ayaa soo gaadhay curcurkayaga. Adiga oo si fudud u taabanaya mid ka mid ah badhannada saacadda ama adeegsanaya codka amarka "OK Google" Kaaliyaha ayaa diyaar u noqon doona inuu na siiyo macluumaadka aan codsanno.
Ogaanshaha cimilada maanta ama waxa ay noqon doonto berrito, dib u eegista liiska shaqooyinka ama boos ka dhigashada makhaayadda ayaa ah xulashooyinka qaar ee kaaliyaha caaqilka ah ee baarayaashu uu na siin doono.
Ma ahan wax cusub oo aynaan ogeyn laakiin ku leh Android Wear 2.0 Kaaliyaha Google Waxay soo gaadhay curcurkayaga, si aynu uga baxno dhibaatooyin badan iyo wixii ka sareeya oo dhan si ay noloshu waxyar uga fududayso. Waqtigan xaadirka ah maskaxda ku hay in kaliya lagu heli karo Ingiriis iyo Jarmal, in kasta oo Google horeyba u xaqiijiyey in wixii cusbooneysiin ah mustaqbalka ay bilaabi doonto in lagu helo luqado badan. Waxaan rajeyneynaa in Isbaanishku ka mid yahay isla markaana ay goori goor tahay.
Shakhsiyeyn iyo fudeyd
Mid ka mid ah waxyaalaha inagu dhow ee ah kuwa isticmaala smartwatch ee wata 'Android Wear' ayaa seegay inta badan waa macluumaadka yar ee aan mararka qaar toos uga arki karno shaashadda. Google sidoo kale wuxuu ka fikiray macluumaad yar oo aan arki karno oo leh Android Wear 2.0 tani wax badan ayey iska beddeli doontaa.
Iminkana hada wixii ka dambeeya waanu u habeyn karnaa wajiga saacadda si ay u muujiso macluumaad dheeri ah oo aan dooranno. Intaas waxaa sii dheer, waxay sidoo kale suurtagal noqon doontaa in la kala qaybiyo qaybo kala duwan, oo leh macluumaad aad u tiro badan, kaas oo aad ku dhaqaaqi karto adiga oo si fudud fartaada ugu dhajinaya bidix ama midig. Tusaale ahaan, waxaad abuuri kartaa xayeysiis macluumaad ah oo kuxiran meesha aad joogto umana baahnid inaad heysato isla xogta gacantaada hadaad xafiiska kujirto sida inaad qolka jimicsiga ku jirto oo kale.
Ugu dambayn waa inaan qaybtaan kuugu sheegnaa taas tillaabooyinka u dhexeeya codsiyada iyo shaqooyinka si weyn ayaa loo fududeeyay si ay u fududaan doonto uguna dhakhso badan tahay ka hor intaadan marin darbiyada qaarkood.
Fursadaha cusub ee adeegsiga codsiyada
Imaatinka Android Wear 2.0 ma aha oo kaliya in nidaamka hawlgalka la horumariyay, laakiin codsiyo badan ayaa soo saaray horumarin iyo waxqabad cusub, taas oo dabcan saameyn ku yeelanaysa dhammaanteen kuwa adeegsada.
Tusaale ahaan Google Fit, Lagu dhajiyay asal ahaan inta badan smartwatches, hadda waxay kuu ogolaaneysaa inaad cabirto masaafada, kalooriyada gubatay ama garaaca wadnaha, iyo sidoo kale inaad socotid, orod ama baaskiil wadid, wax dad badan u noqon kara waxtar weyn.
Facebook Messenger, Glide, Google Messenger, Hangouts, Telegram iyo WhatsApp sidoo kale way soo fiicnaadeen waana iyadoo kaliya taabashada ogeysiinta fariinta aad ka jawaabi karto, sheegida fariintaada ama sheegida jawaabtaada.
Sidoo kale hadda waxaan toos ugala soo degsan karnaa barnaamijyada Google Play taas oo ku dhexjirta aaladda lafteeda, kana takhalus menu-ka dhammaan kuwa aanan isticmaalin.
Imaatinka rasmiga ah ee Android Wear 2.0, ogeysiisyada wax badan baa iska beddelay. Halkii laga heli lahaa kaararka cad ee ka soo muuqday shaashadda hoosteeda, oo aan cidina jeclayn, hadda waxaan ku arki doonnaa ogeysiisyada qaab ka fudud oo ka sarreeya dhammaan waxtar leh.
Waxay kuxirantahay dalabka aan ka helno ogeysiiska, waxaan ku arki doonaa midab ama midkale. Intaas waxaa sii dheer, waxay soo muuqan doonaan oo keliya markaad curcurka u keento indhahaaga oo haddii aad rabto inaad wada aragto ogeysiisyada oo dhan dhib ma leh maadaama ay kugu filnaan doonto inaad ka rogto shaashadda weyn si aad u aragto.
Ugu dambeyntii iyo in la xiro liistadan qodobbada muhiimka ah ee aan ku arki karno kuna raaxaysan karno 'Android Wear 2.0', ma ilaawi karno imaatinka Android Pay ee caruusadahayada. Nidaamka lacag bixinta ee Google ayaa ugu dambeyntii ku soo degay smartwatches-keena waxaana hadda suurtagal noqon doonta in la bixiyo iyadoo la adeegsanayo saacaddeenna casriga ah, illaa iyo inta qalabkeenna moobiilku leeyahay NFC.
Waqtigan xaadirka ah nidaamkan lacag bixinta wuxuu bilaabayaa inuu kasbado kuwa raacsan waana in lafilayaa in hada oo ay caga dhigatay Android Wear, tirada dadka isticmaala ee bixiya isticmaalka aaladaha ay xiran karaan ayaa kusii kori doona xawaare wanaagsan. Dabcan, waxaan rajeyneynaa inay fududahay, raaxo iyo dhaqso leh in la isticmaalo, maadaama seddexdan shay ay fure u noqon doonaan mustaqbalkaaga.
Marka xigta waxaan ku tusi doonaa, si aad u nadiifiso wixii shaki ah, ee liiska buuxa ee smartwatches inay heli doonaan cusboonaysiinta Android Wear 2.0 ee taariikhaha wali ay cayimayaan soo saarayaasha kaladuwan;
LG Daawashada R
Michael kors marin u hel
Moto 360 2-aad Jen
Moto 360 ee Haweenka
Dheelitirka Cusub ee RunIQ
TAG Hever wuxuu ku xiranyahay
Aynu xusuusano in dhowaan la soo bandhigay LG Watch Style iyo LG Watch Sport ay horay u haysteen Android Wear 2.0 oo asal ahaan lagu rakibay, haddana waa inaan sugnaa oo keliya imaatinka nooca cusub ee nidaamka hawlgalka Google ee qalabkeenna si aan u tijaabino sheeko cusub iyo wax qabad cusub, oo bilaw gunaanad ka soo qaad.
Maxaad u maleynaysaa horumarada cusub ee Google kusoo bandhigtay Android Wear 2.0?. Noo sheeg fikraddaada meesha banaan ee loogu talagalay faallooyinka qoraalkan ama mid ka mid ah shabakadaha bulshada ee aan ku sugan nahay. Sidoo kale noo sheeg waxa shaqeynaya ama astaamaha cusub ee aad jeclaan laheyd shirkadda weyn ee raadinta inay ku siiso nooca cusub ee Android Wear.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Qalabka la gashan karo » Kuwani waa sheekooyinka ugu waaweyn ee aan ka heli doonno '' Android Wear 2.0 ''
Waxaa laga yaabaa in shaqooyinka gudaha ee nooca cusub ay yihiin caano, laakiin ku saabsan ogeysiisyada ... shit ..
Xitaa haddii aad fiiriso saacadda, illaa iyo inta aadan taaban "kor", waa wax aan macquul aheyn in la ogaado haddii aad hayso ogeysiis. Ujeedkiisu waa inuu halkaas iska joogay, si aan si fudud ugu aragno.
Haddayna tahay whatsapp ... iska illow arrintaas "in a pliqui" waanu ka jawaabi karnaa. Yay ahayd fikradda ah in la dhigo waxa ugu dambeeyay ee ugu sarreeya wadahadalka?
Iska daa, macno ahaan macquul ah. Oo haddaad rabto inaad si dhakhso leh u akhrido korka, uma baahnid inaad ku baxdo kharash waali ah oo aad ku bixineyso dhammaan dadka diinta ku biiraya
Oo ka jawaabisteeda ... ma sahlana haba yaraatee. Kahor "xaafadda" shaashadda oo ka jawaab. Hadda waa inaad fiirisaa gudaha rogayaasha loogu talagalay astaanta si aad u riixdo si aad uga jawaabto.
Iyo waliba, kahor intaadan amrin iyo inyar kadib ... fariinta ayaa si iskood ah loodiray. Hadda sidoo kale waa inaad gacantaada bilaash ku sugtaa oo sugtaa astaanta yar inay u muuqato inay taabato oo ay dirto farriinta.
Tani waa waali.
Kahor ... Xitaa markaad gaari wadid waxaad kajawaabi kartaa WhatsApp adiga oo aan qatar lahayn. Hadda waxay noqon laheyd waalli badan isku day.
Aan aragno haddii ay cusbooneysiiyaan nooca maxaa yeelay cusbooneysiinta ka dib, waxaan u xiisay qaabkeygii hore
Shaashadda LG G6-ka cusub ayaa qadka ka sii daaya
Kuwani waa heshiisyada ugu fiican ee usbuuca ee aan ka heli karno Amazon